कोरोना संक्रमितकाे श’व व्यवस्थापनकै क्रममा पोखरामा गो’ली चल्यो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना संक्रमितकाे श’व व्यवस्थापनकै क्रममा पोखरामा गो’ली चल्यो!
कोरोना संक्रमितकाे श’व व्यवस्थापनकै क्रममा पोखरामा गो’ली चल्यो!
admin June 9, 2020 June 9, 2020 समाचार, समाज, स्वास्थ्य 0
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट पोखरामा मृत्यु भएका स्याङ्जाका ६० वर्षीय पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्न प्रशासनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । शव लिएर गएको गाडीको बाटो छेक्न स्थानीयबासीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसदसमेत आएपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपरेको छ ।
जेठ २२ गते सुनौली नाकाबाट उद्दार गरिएका वालिङ नगरपालिकाका उनलाई २३ गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा भर्ना गरिएको थियो । उनमा कोरोना संक्रमण भएको आइतबार पुष्टि भयो भने राति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । शव व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो १६ घण्टासम्म उनको शव अस्पतालको आइसोलेसनमा अरु सं‌क्रमितसँगै रह्यो ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार यसका लागि स्थानीय तह, प्रशासन र नेपाली सेनाले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार घाट खोज्ने जिम्मा पोखरा महानगरपालिकाले पायो भने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पोखरा फूलबारीस्थित भगवती दल गणलाई दिइएको थियो ।
महानगरले वडा नं ११ मणिपाल शिक्षण अस्पतालभन्दा केही तलको सेती नदीस्थित रिठ्ठे घाटमा संक्रमितको शव गाड्ने निधो गर्‍यो । नेपाली सेनाले शव गाड्न खाल्डो खनेर ठिक्क पारिसकेका थिए । तर वडा नम्बर ११ र २० का वासिन्दाले विरोध गरे । सेती किनारमा शव गाड्दा आफूहरुलाई जोखिम हुने उनीहरुको तर्क थियो ।
पोखरा महानगरको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष मोहन बास्तोला, वडा नम्बर २० का अध्यक्ष सिम गुरुङ, प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापा समेत शव लैजान नदिने अडानमा थिए । पश्चिमाञ्चल अस्पतालको ठिक अगाडि रामघाट हुँदै शव गाड्न ल्याइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । नेपाली सेनाको टोलीले शव लैजान खोज्दा स्थानीय वासिन्दाले पटकपटक अवरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
विरोध गर्नेहरुले शव बोकेको गाडीको बाटो नै छेक्न आएपछि प्रहरीले लाठी चार्जसमेत गरेको छ । प्रहरीको लाठीचार्जबाट वडाध्यक्ष बास्तोलासहित केही सामान्य घाइते भएका छन् । श्रीमानको शव हेर्न उनकी श्रीमती छोरीसहित दिउँसै अस्पताल पुगेका थिए । तर शव व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदा आफन्त गुमाएका उनीहरुमाथि भने थप पीडा भएको छ ।
छोरीहरुसँग छमछमी नाचेर टिकटक बनाउदै गरेकि हिमानीको भिडियो यस्तो भाइरल (भिडियो सहित)
सरिता गिरीको दोहाेराे नागरिकता भए तुरून्त खारेज गरेर निलम्बन गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग!
आयो खुसीको खबर : यही साउन ३१ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुने
जन्ती बोकेको जीप आठबीसकोटमा दुर्घटना, ४ जनाको घटनास्थलमै सकियो जिन्दगी!
भागिरथ प्रकरण : अभियोग पुष्टि भए पनि आरोपी जेल जानु नपर्ने यस्तो छ कारण! हेर्नुहाेस्